दुनियाकै मनमा बसेका डाक्टर-नर्सकी छोरी सियोनालाई ग’म्भीर समस्या : उपचारमा २५ करोड लाग्ने…सक्दो सेयर गर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
काठमाडौ : मानिस जन्मिदै कस्तो भाग्य लिएर आउँछ त्यो कसैलाई थाहा छैन । नानी सियोन श्रेष्ठ अहिले मात्र १३ महिनाकी भइन् । उनकी आमा एलिना गुरुङ् पेसाले नर्स हुन । बाबु डा. सन्दिप श्रेष्ठ आफैमा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुन् । उनले विशेषज्ञताले हज्जारौ नानी बाबुहरुको जीवन रक्षा भएको छ । उनी छोटो समयमा नै हरेक नेपालीको मनमा बस्न सफल चिकित्सकमा पर्छन् ।
यो मेरो परिवार, मेरा आफन्त वा मेरो समुदायको सहयोगबाट मात्र सम्भव छैन । मेरी नानी विस्तारै विस्तारै कमजोर हुँदै गएको म एक आमा भएर कसरी हेर्न सकुँ । क्रिपया नानीको जीवन रक्षाका लागि पुर्न जीवनको भिख माग्छु । तपाईको सानो सहयोग नै मेरो नानीको पुर्नजीवन हुनेछ
Prevपूर्वमाओवादीको चेतावनी- लहरो तान्दा पहरो खस्ला !
Nextकल्पना दाहालको आमा बिरामी भइ अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहालाइ छिटै सन्चो होस भनि सबैले भगवान सँग प्रार्थना गरौं ।
अब खाडीबाट खर्चविहीन नेपाली नि:शु,ल्क आउन पाउँछन्, होटल पनि फ्रि : मन्त्री भट्टराई,,, हेर्नुहोस् भिडियो सहित